12 Iindawo ezingcono kakhulu zabathandi bezodwa | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba eYurophu > 12 Iindawo ezingcono kakhulu zabathandi bezodwa
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Qeqesha uhambo ePortugal, Uloliwe ohamba eScotland, Uloliwe eSwitzerland, Qeqesha uKhenketho e-UK, Ukuhamba eYurophu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 17/12/2021)
Enye yeendlela ezilungileyo zokudubula kothando kukuchitha ixesha uwedwa, nobabini nje, kwaye uqhagamshele kwakhona. Ubomi bale mihla buxakekile yaye buxakekile, kulula ukuvumela umlingo kunye noqhagamshelo olukhethekileyo onalo luphele ngasemva. ke, siqokelele ezona ndawo zizimele zodwa, i 12 iindawo ezifanelekileyo zabathandi bokuhlala wedwa ukuze bavuselele iintlantsi kunye nomlilo.
Ngaphantsi kwemithi yepine, ujonge ulwandle ukusuka kwindlu yakho yemithi, uya kufumana ezi ndawo zibalaseleyo kwezona ndawo ziphefumlayo.
1. Iindawo ezingcono kakhulu zabathandi bezodwa: eSkotlani
Iindawo eziphakamileyo eziluhlaza, imihlaba emikhulu, kunye neenduli apho unokugonwa khona njengoko ujonge kuLwandlekazi lweAtlantiki. Imbonakalo yelizwe laseScotland yenye yezona mbono zibalaseleyo kwihlabathi. Phakathi kokuhamba, uzimele kwiveni yakho, okanye indlwana entle, I-Isle of Sky yenye ye most wanted couple’s trips destinations.
Ngaphezu, I-Isle of Sky idume ngeziqithi zayo ezimangalisayo, amachibi, kunye namabala afana nentsomi. ke, unokubhadula ngokulula, kwaye uphonononge ngaphandle okukhulu kunye. Indawo engaqondakaliyo ephantse ibe yeyobuthixo kwi-Isle of Sky ineendawo ezininzi zothando kubathandi bokuhlala wedwa, Ke akufuneki ube nexhala malunga nokuphazanyiswa ngabakhenkethi abanomdla kwaye unokuba nelona xesha libalaseleyo lothando kunye.
Indalo yasendle nengaphathwanga e-Indonesia yaziwa ngokuba yenye yezona zicwangciso zothando kwihlabathi. Ngaphezu, i Oovimba bendalo eIndonesia kukho iingxangxasi ezininzi, amachibi endalo, kwaye iyazibuza ukuba uthando lungazifihla phi kude nehlabathi kangangexesha elithile.
kunjalo, ukuba u khetha iimbono eziphefumlayo yolwandlekazi lwaseIndiya nolwePasifiki, emva koko ukuhlala kwi-treehouse yangasese eyimfihlo kuya kufezeka. I-Indonesia idume ngobuhle bayo iholide eco-friendly iindawo zokuhlala. Iikhabhinethi zokhuni, izindlu zemithi, kunye neevillas zezona zirenti zeholide zothando eIndonesia. KwiBali, Ubud, ngeembono zolwandle okanye zehlathi, I-Indonesia yenye yezona zibalaseleyo 5 iindawo ezilungileyo kubathandi bodwa.
3. Iindawo ezingcono kakhulu zabathandi bezodwa: Wopha, Sloveniya
Ukuvuka ukuya kwimibono yechibi phakathi kweentaba, ILake Bled yindawo enomtsalane yokubalekela isibini eSlovenia. Beka kwiJulian Alps, kunye namahlathi ngeenxa zonke, inqaba edumileyo yaseBled, kunye nesiqithi onokuqubha kuso, I-Bled Lake inothando kakhulu. Amanzi e-turquoise abonisa imithi kunye neentaba ezijikelezileyo enza umoya okhethekileyo kunye nozolileyo wesidlo sakusasa sesibini..
Ngaphezu, ezininzi ze iirenti zeeholide kwiLake Bled yiza nonxweme lwabucala, ngqo kwikhabhathi yakho yabucala. ke, nangona iLake Bled iyindawo ethandwayo yeeholide eSlovenia, ngokuqinisekileyo ungafumana iqhekezana lezulu elingasese kwindawo yakho yokuba wedwa.
4. IiAlps zaseFrance
Ukugonwa emlilweni kubusuku obunekhephu nzulu kwiiAlps yenye yezona zinto zothando ehlabathini. Ebusika iintaba zeAlpine zaseFransi zonke zigqunywe likhephu, ukumenyezela elangeni ngentsasa yasebusika enelanga. Umoya upholile kwaye uhlaziyekile, exuberating nge sip yekofu emnyama phambi kokuba uqale usuku lwakho phantsi kumathambeka.
Ebusuku iimbono ingakumbi zothando olunzulu kwiiAlps xa iinkwenkwezi ziphuma, kwaye ukukhanya okukuphela kweemayile kuvela kwi-glamping pod yakho. Ukuba ubungayazi ukuba iRhone-Alps yenye yezona zinto zininzi ukuthandana glamping eRhone-Alps eFransi. Ivalelwe, olusondeleyo, ngephambili, kwaye yodwa, ugqibelele kwezothando nokuba wedwa.
5. Iindawo ezingcono kakhulu zabathandi bezodwa: ePiedmont eItali
Enye indawo eyoyikisayo yokubaleka kwezothando eYurophu yiPiedmont e-Itali. the indawo yewayini ethandekayo imi phakathi kweFransi neSwitzerland, emazantsi eAlps. IPiedmont likhaya lezona ndawo zintle zokurenta kubathandi abazimeleyo kwiintlambo zaseVal di Susa..
Ukongeza kokungcamla iwayini, ungahamba uhambo lothando, kwaye ugqibezele ngepikiniki yothando. Enye indlela entle yokuchitha ixesha kunye kukutyelela iinqaba ephakathi, kwaye iPiedmont ineenqaba ezimangalisayo. ke, IPiedmont yindawo entle yokuhlalisa isibini e-Itali.
UMilan ukuya eTurin Ngololiwe
ILake Como ukuya eTurin Ngololiwe
Genoa ukuya eTurin ngololiwe
Parma ukuya eTurin Ngololiwe
6. La Sage eSwitzerland
Ukusuka kwiChamonix ukuya kwiZermatt, La Sage ukuya Le Prelet, okanye iArola, zintathu ze iindlela ezidumileyo zokuhamba eLa Sage. Iindledlana zinde kakhulu, kodwa iimbono zi-epic kwaye ziyifanele yonke imizamo yakho. Ngaphezu, iimbono odibana nazo endleleni zezinye ezintle ehlabathini.
Kuba ezi ndlela zinde kakhulu, uya kuba neendawo ezininzi zokuhlala, Phola, kwaye ube nendalo entle kakhulu kuwe. Izihlwele zabakhenkethi ziya kuba semva kakhulu, kwaye kuya kuba nguwe kuphela, isibhakabhaka, ingca eluhlaza, iintlambo ezingezantsi, kunye nesithandwa sakho ecaleni kwakho. Akukho ndawo ingcono eSwitzerland ngexesha lothando kunye nokuba wedwa kunye.
7. Iindawo ezingcono kakhulu zabathandi bezodwa: Tuscany Italy
Isiselo somdiliya, Iivillas zaseItali, kunye namakhulu eekhilomitha phakathi kweedolophu ezincinci ezithandekayo, akukho nto inokugqwesa iTuscany njengendawo yokubaleka yothando kubathandi bokuhlala wedwa. Indawo efana nekhadi leposi yenza ukuba nayiphi na intliziyo ibethe ngokukhawuleza ngokumangala kwaye yongeza umoya womlingo. Xa nobabini nifika eTuscany, niya kuphulukana neziqu zenu nizishiye ngasemva zonke iingxaki.
Montichiello, umzekelo, ilali yenkulungwane yeshumi elinesihlanu, yenye yezona ndawo zibalaseleyo zabathandi bezodwa eTuscany. Ungazulazula kule lali yakudala, ukutshintshiselana ngokwanga, ngaphakathi kweendonga zayo, iipaseji zamatye kwaye ndincoma iimbono zeenduli eziluhlaza zaseTuscany.
8. Ihlathi eliMnyama eJamani
Ishinyene, Ihlathi elihlala liluhlaza elimnyama kumazantsi-ntshona eJamani likhulu kangangokuba nasiphi na isibini sinokuphuma ngokupheleleyo kwi-radar. Ukusuka ekukhweleni intaba ukuya ekuphumleni, Ihlathi eliMnyama yindawo emangalisayo yokubuya kwesibini. Umzekelo, Ukuba ngaba isibini esithandana ngaphandle, ungafumana iindlela ezininzi zokukhwela intaba kwiHlathi eliMnyama, njengomzila oya kwiingxangxasi zaseTriberg, kwaye mhlawumbi ube nepikiniki ekufutshane.
okukanye, Ungaya e-Baden-Baden ixesha lokuphumla kwindawo ephucukileyo ye-spa okanye uhlale nje kwaye uphumle kwi-tub yakho yabucala yangaphandle eshushu.. Ngolunye uhlobo, ukuhamba ukuya kwiHlathi eliMnyama iya kuba sisithembiso ngamaxesha omlingo, kubathandi bokuhlala wedwa eYurophu.
Offenburg ukuya eFreiburg Ngololiwe
Stuttgart ukuya eFreiburg ngololiwe
ILeipzig isiya eFreiburg ngololiwe
eNuremberg ukuya eFreiburg ngololiwe
9. Iindawo ezingcono kakhulu zabathandi bezodwa: UNxweme olukuMntla woMntla Ireland
Ngamawa amangalisayo kunye neembono ezimangalisayo, unxweme olusemantla eIreland yenye yezona ndawo zinomtsalane e-UK. UMntla Ireland wawuneedolophu ezincinci ezigudle ulwandle, kunye nezindlu ezincinci ezithandekayo, kunye nomzila okhokelela ngqo kumbono wolwandle. ke, kukho iindawo ezaneleyo ezifihlakeleyo zothando ukuze ubukele ukutshona kwelanga okanye uhambe ngaselunxwemeni.
Njengokuba, I-Ballintoy Harbour inomhlaba onamatye kunye nonxweme lokuhamba ngothando kunye neepikiniki. Enye indawo yothando kakhulu yiGiant Causeway, indawo ekhethekileyo yokuhlola kunye nomnye wakho obalulekileyo. Unxweme olukuMntla weIreland yindawo entle yeeholide kubathandi bokuhlala wedwa.
10. Intaba yaseFerdi eOstriya
Phakathi kweentaba ezithandekayo ze-Enns kunye ne-Dachstein, Intaba kaFredi yenye yezona ndawo zibalaseleyo kubathandi bokuhlala wedwa. Imithi yompayina eshinyeneyo, iincopho ezimangalisayo phambi kwakho, kunye nokuzola ngeenxa zonke, Intaba kaFredi idala isetingi esifanelekileyo sokubaleka kwezothando.
Ngaphezu, lo mmandla ungasese ulikhaya kwezinye zezona ndawo zothando zikude nekhaya. Ngesauna yabucala, ithala, kunye nembono ekhethekileyo yeentaba zaseAustria, Fredi Intaba yenye 12 ezona ndawo zothando, ixesha elithile lomlingo elisemgangathweni. Inyaniso, UFredi ukude kakhulu, eyona ndlela yokufikelela kuyo ngemoto kuba ingekho izithuthi zikawonke wonke kule ndawo ikhethekileyo kwiintaba zaseAustria.
11. Iindawo ezingcono kakhulu zabathandi bezodwa: IAlgarve iPortugal
Iilwandle ezinesanti, iicoves ezimangalisayo, amanzi e-turquoise, nelanga liphuza ubuso bakho, akukho ndawo iphuphayo kuneAlgarve. IPonta Da Piedade kunye neeseyile zayo, Amawa, i-arches kwiitoni zobusi ngokuchasene namanzi e-turquoise yenye yemifanekiso ephefumla kakhulu kwihlabathi, kunye nenye yezona zithandana kakhulu. Olunye ulwandle oluhle kakhulu onokuthi ulahleke kulo yiPraia da Rocha. Ivalelwe, ethule, entle, kwaye ifanelekile ukuba iintaka zakho zothando zizulazule, ukuhlamba ilanga, umo-.
Amagugu endalo e-Algarve yiparadesi emangalisayo yasehlotyeni. Iilwandle kunye nama-cove abomvu afanelekile kulonwabo lothando ngaselwandle. Jonga ukutshona kwelanga, tsibela emanzini, okanye ube neglasi yewayini, uthando lusemoyeni eAlgarve. Ngaphezulu kwayo yonke, obu buhle bungasese bukufutshane neLagos, ngoko ungabaleka nanini na xa ufuna.
12. Cotswolds eNgilani
Ukusasazeka kwiingingqi ezintlanu, Izindlu zaseCotswolds, kunye neebhulorho zamatye zibonakala zikhenkceke ngexesha. Lo mmandla ubukekayo ulikhaya leNkosana yaseWales's Highgrove estate kunye nezindlu zamatye ezinomtsalane. Omnye usenokucinga ukuba baye bahamba emva kwexesha, kwindawo engasese yendlu yakho. Ngaphezu, njengoko kukho i-architecture egqwesileyo, ilungele amalungu osapho lwasebukhosini, iigadi ezintle aziweli kude emva kwegadi kaKumkanikazi eBuckingham Palace.
ke, ngelixa iCotswolds ikude kakhulu, eyedwa kumaphandle amaNgesi, yeyona ndawo ifanelekileyo kubathandi bokuhlala wedwa. Ukukhetha phakathi kokuhamba, kunye nokungcamla kwetshizi, inokuba nzima xa useholideyini, kodwa inye into eqinisekileyo, I-Cotswolds yindawo yothando kakhulu eNgilani.
Thina Gcina A Isitimela Ndingakuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo oluya kwezi 12 Indawo ezigqibeleleyo zabathandi beZodwa.
Ngaba uyafuna ukushumeka iposti yethu yebhlog “Iindawo ezili-12 eziGqwesileyo zaBathandi beZodwa” kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fbest-places-solitude-lovers%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
BestPlacesSolitudeLovers	uthando	lover	Serenity	Solitude	SolitudeLovers
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSpain, Ukuhamba eYurophu
Phezulu 10 Tips Easy Kuba Train Riding Smart Kuyo Yonke Indawo